Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE | Grandir à Antsirabe
Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE
Roa andro ho an’ny fanentanana sy fifampizarana
Ny 28 sy ny 29 jona lasa teo no nanatanterahana ny andiany faharoa tamin’ilay hetsika « forum des associations » karakarain’ny tambazotra OSCAPE. Roa andro nanomezana tombony ho an’ny fifanakalozana sy fifampizarana ary ihany koa nahafahan’ireo fikambanana mpikambana naneho hevitra tamin’ireo olom-pirenena liana. Fotoana nahafahana nanaraotana hanentanana ny fiaraha-monina momban’ny fiarovana ny ankizy.
Ny tambazotra OSCAPE ?
Ny grandir à Antsirabe dia anisan’ny mpikambana mpiara-miasa amin’ny tambazotra. Niforona tamin’ny Aprily 2011 ny oscape, saingy kosa efa niasa nanomboka ny taona 2009, ny asan’ny tambazotra OSCAPE dia mampifandray, mampahafantatra ary mampiofana ireo fikambanana eto an-toerana misehatra ho an’ny ankizy tratran’ny tsy fahazariana eto amin’ny tanànan’Antsirabe.
28 jona isika izao. Amin’ny 8 ora maraina ny andro. Mifoha ny tanànan’y lapan’ny kolon-tsaina eto Antsirabe miaraka amin’ny fananganana ireo trano heva. Tonga tsikelikely ny olona, tafatsangana ireo trano heva ary vonona ny fanentanana ho an’ny ankizy.
Tamin’ny 9 ora dia vonona ny rehetra. Ny hiram-pirenena no nanombohana ny hetsika. Nampandrosoana ireo solotenam-panjakana izay nahitana ny solotenan’ny Ben’ny tanàna, ny tao amin’ny ministeran’ny mponina sy ny sotenan’ny faritra vakinankaratra. Tao anatin’ny tranoben’ny kolontsaina dia nisy ny fampahafantarana ireo mpiandraikitra ao amin’ny tambazotra OSCAPE narahan’ny fandraisam-pitenenan’ireo manam-pahefana. Nisy ny mari-pankasitrahana natolotra ireo fikambanana, rehefa vita izany dia nitsidika ireo trano hevan’ny fikambanana ireo manam-pahefana.
Hetsika maro isan-karazany no nanamarika iny roa andro iny ary anisan’izany ny famelabelaran-kevitra momban’ny fiarovana ny ankizy. Trano heva natao hilalaovan’ny ankizy : « face painting », jono, toraka kapoaka sns, hafaliana no azon’ireo ankizy izay nifampizara tamin’ny fikambanana ho an’iny fotoana nahafinaritra iny.
Ny fikambanana mahasoa dia nikarakara hetsika momban’ny fanoratan’ny jamba izay nahaliana ireo mpitsidika. Nisy ihany koa ny fampianarana baiko moana.
Ireo ankizin’ny fikambanana dia nifiandimby niakatra sehatra : Dihy, hira, cirque ary kabary no hita tain’izany. Ny ihany koa ny fampisehoana ady totohondry izay tena nahatalanjona ireo ankizy koa dia variana sy tsy nahitan-teny izy ireo.
Tatitra tsara sy mahafa-po no azon’ny fikambanana
Ny fikambanana Grandir à Antsirabe dia afa-po tanteraka tamin’ny hetsika izay nahitana fanentanana sy fifanakalozana niaraka tamin’ny trano heva izay nitondra ny lokon’ny fikambanana. Afaka nampahafantatra ireo fandaharan’asany ny fikambanana, namaly ireo fanontanian’ny mpitsidika ary nifampizara hevitra momban’ny fiarovana ny ankizy ; izany dia nahafaly tanteraka ny fikambanana, harena ho an’ireo mpiasan’ny fikambanana ary nankasitrahan’ny mpiara-monina.
Ny fahazoana laharam-pifandraisana maro sy ny fangatahana hilatsaka an-tsitra-po ho an’ny fikambanana no maneho fa tafita ny hafatra ho an’iny roa andro iny.
Mitoraka voninkazo ho an’ny tambazotra OSCAPE tamin’ny fandavantenan’izy ireo sy ny fahalavorarian’ny fotoana! ireo fikambanana rehetra ao anatin’ny tambazotra tamin’ny asa nataon’izy ireo, Mankasitraka ireo ankizy tamin’ny tsikitsiky ary ireo olom-pirenena tamin’ny fanotronana sy ny finiavana te hamanta-javatra ary ny fandavan-tenan’izy ireo.
Lire aussi : Mpiofana ho injeniera manome tanana amin’ny fananganana ny CHT
MG	Asa fanorenana ifanomezan-tanana : Fanitarana ny t…